4 Maitiro Ekudzora Njodzi yeRampant Kubiridzira Kubiridzira | Martech Zone
Dhijitari Kushambadzira ingangove iri yepamusoro midhiya kushambadzira mari muna 2016 maererano comScore. Izvo zviri zvakare kuzviita iyo isingadzivisike chinangwa chekubira kubiridzira. Muchokwadi, sekureva kweshumo nyowani pamusoro pehunyengeri muindastiri yekushambadzira indasitiri, chetatu chezvinhu zvese zvekushambadzira zvichaparadzwa pahunyengeri.
Distil Networks uye Interactive Advertising Bureau (IAB) vaburitsa Dhijitari Muparidzi Dhairekitori Kuyera uye Kudzikisira Bot Traffic, chirevo chinoongorora yanhasi dhijitari kushambadzira dambudziko.
Kiyi Dzvanya Kubiridzira Kutsvaga
75% yevaparidzi uye 59% vashambadziri havakwanise kutsanangura vanhu vachipesana nevanhu vasiri vanhu.
Yakagadzirirwa analytics (50%) uye kutungamira kwekunyepedzera uye kunyoreswa kwenhema (32%) zvakare akakosha asiri evanhu traffic matambudziko kune vese vaparidzi nevashambadzi.
Dzvanya uye fungidziro kubiridzira ndizvo zvinonyanya kunetsa kune vese vaparidzi (86%) nevashambadzi (100%) kana zvasvika kune zvewebhu traffic nyaya.
Chirevo ichi chakadzama-kusimba uye chinofamba vaparidzi nevashambadzi kuburikidza nemabatiro ehunyanzvi anoshanda pamwe nemaitiro ekuderedza njodzi, kusanganisira:
mutambo - Tarisa zvishoma pane mbishi nhamba uye zvimwe pane zvinoonekwa zviito. Sanganisa inokurudzirwa mashandiro ematanho kune yako agency kuti uve nechokwadi chemhando bhizinesi mhedzisiro.
Regedza Maonero - Kuonekwa kuri nyore kunyepedzwa nemabhoti uye neimwe isiri-yevanhu traffic.
Quality - Bhajeti yemhando yepamusoro, kwete huwandu. Govera mari kure nenzvimbo refu-muswe mukushambadzira kwekushambadzira, uko kubiridzira kuri kwakawanda uye kutenga zvinyorwa pane zvakanyanya, epamusiti masiti.
Zvinoda Kujeka - Kana iyo agency yako kana vashambadziro vevashambadzi vasingakwanise kukuratidza iko kushambadziro imwe neimwe
pfungwa yakapihwa, usashandise.
Dhawunirodha Chinyorwa cheDhijitari Muparidzi Kuyera uye Kudzikisira Bot Traffic
Tags: kushambadzira kubiridziraAmerican Association Yekushambadzira MasanganoAnaSangano revatengesi venyikabaya chitsotsiDistil NetworksIABInteractive Advertising Bureauisiri-yevanhu trafficngoziTagrakavimbika rekuzvidavirira boka
Typography terminology: Apex kuna Swash uye iyo Gadzook Pakati
5 Maindasitiri Akachinja Zvakanyanya neInternet
Gumiguru 29, 2015 na7: 25 PM
Mhoro Douglas- chinyorwa ichi chinofukidza zvakanaka nyaya yekubiridzira, asi haipe mhinduro chaiyo, sezvo kubiridzira kwekubaya kungave kusingagare kuchinetswa netra traffic. Pfungwa ingave yekungwarira chaizvo nezvirongwa zvine chekuita nekunongedzera geo (senge zviri pasi pe + Zvinyorwa zvemberi). Zvakare, kushandisa yakatsaurwa software, senge http://www.xionagrup.ro inogona kunge iri pfungwa yakanaka, kana kunyangwe kushandisa vanogadzira matanda kuti vaone kuti ndeapi maIPs kana makirasi ari kubaya pamashambadziro ako.